Fomba 5 mampihena haingana kokoa
Tsy vita vetivety izany fampihenan-tena izany raha ny tokony ho izy. Azo atao kosa anefa ny manafaingana ny fihenana. Mety hanampy anao amin’izany ireto :
PAIPAIKA 5 HAFAKELY MAMPIHENA
Taorian’ny fialan-tsasatra dia mety somary nahazoazo aina kely ny vatana. Mety misy tavy kely manodidina ny valahana.
Fampihenan-tena amin'ny alalan'ny spaoro : Ireo hevi-diso 4 tsara ahitsy
Matetika mihitsy no heverina fa ampy hampihenana tena ny fanaovana spaoro. Misy ihany anefa ny hevi-diso tokony ahitsy mahakasika izany. Ireto avy izy ireo:
Smoothie kiwi amin’ny mananasy, manala cellulite
Satria rano miandrona ao anaty no mahatonga ny cellulite dia hanampy anao hanaisotra ny cellulite indrindra ity zava-pisotro ity.
Kafe sy sokola, mandoro ny tavy
Ezaka miainga amin’ny fanamboarana ny sakafo ho voalanjalanja ny fampihenan-tena. Na izany aza, manamora ny fampihenan-tena atao ny misotro zava-pisotro sahala ireto atoro anao ireto.
Sady manadio ny ao anaty, no mihena…
Miavaka amin’ny fanaovana “regime” ny “detox”. Manadio ny ao anaty mantsy izy kanefa mampihena koa. Mahasalama kokoa ny manao azy. Atoro anao ny paipaika tsaraarahina mba hampahomby ny “detox” atao :
Jus baranjely, mampihena, manafisa-kibo
Manoro hevitra ny olona maniry hampihena tena ny “nutritionnistes” mba hisotro zava-pisotro vita amin’ny baranjely noho ireo tombon-tsoa azo avy aminy rehetra ireo :
Toy izao no fikarakarana azy :
· Baranjely lehibe 1
· Rano tapa-litatra
Voasana ny baranjely dia tetehina madinika. Atao ao anaty lovia jobo lehibe iray avokoa ireo baranjely voatetika dia rakofana ny rano mangatsiaka. Avela hilona ora 2.
Raha efa izay dia hampangotrahina ao anaty vilany kely feno rano mandritra ny 15 minitra ireo baranjely efa nilona. Rehefa mangotraka ny rano dia alefa ao amin’izay ny ranom-boasarimakirana. Vonoina ny afo dia atokana mandritra ny 10 minitra ilay zava-pisotro izay vao avy nototoina tamin’ny mixeur.
Sotroina 15 minitra mialohan’ ny sakafo lehibe rehetra ity zava-pisotro ity mandritra ny fe-potoana hanaovana ny fampihenan-tena. Iray vera monja dia ampy.
Manatsara ny tsirony somary mananganangana ny voasarimakirana sady manafaingana ny vokatra azo koa.
· Legioma manatsara ny fandevonan-kanina ny baranjely. Manakana ny vatana tsy hitroka tavy koa ny singa antsoina hoe : “saponine” entiny ao anaty ao
· Manampy miady amin’ny « cellulite” koa ny baranjely noho izy be rano ka miady amin’ny fitahirizan’ny vatana rano.
· Mamono ny “radicaux libres” ny baranjely. Ireny no anisan’ny pozina izay mahatonga ny vatana hitahiry tavy sady mahatonga aretina toy ny homamiadana koa.
· Tsy mampitohana ny baranjely noho izy be “fibres”
· Manampy ny aty hiasa tsara ny baranjely. Rehefa miasa tsara ny aty dia mora dia mora ho an’ny vatana ny mihena.
· Mandrindra ny tahan’ny kolesteroly anaty rà koa izy.
· Mitondra kalsioma, potasioma, sodioma, fosfora ary fer ho an’ny vatana ny baranjely.
Tsara ho fantatra :
· Tsy maintsy mila fikarakarana ny baranjely fa tsy azo avy hatrany dia hohanina. Mety hankarary vavony na hitarika aretin’andoha izy raha tsy izany noho ilay singa antsoina hoe : “solanine” ao anatiny izay pozina ho an’ny vatana ihany. Ireo baranjely somary mafy no tena tsara.
· Tena mampihena ity zava-pisotro ity. Tokony hihetsiketsika 30 minitra isan’andro sy hiezaka hisakafo voalanjalanja ihany koa anefa ao anatin’izany mba tena haharitra ny fampihenan-tena hatao sy ny vokatra azo.